တခါတလေတော့လဲ: World AIDS Day
""AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်စို့""
မိန်းကလေးတော်တော်များများကလဲ ဒီလိုကျမ်းမာရေးဗဟုသုတတွေ တော်တော်နည်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေ လူရှေ့သူရှေ့မှာ အရမ်းရှက်တတ်ကြတယ်။
အဲဒါမြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့ ရဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပဲ.........
လူရှေ့မှာသာရှက်တတ်ကြပြီး လူနောက်ကွယ်ရောက်ရင် မရှက်တတ်ကြတဲ့
ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတမကြွယ်ဝကြတဲ့ မိန်းကလေးအချို့ဘာတွေဖြစ်နေကြပြီထင်သလဲ....
ဒီဆောင်းပါးလေးကိုတင်လိုက်ရတာတချို့ က ဖတ်ပြီးတမျိုးထင်နေမလားလို့စဉ်းစားမိသေးတယ်။
ုခု Dr တင့်ဆွေရဲ့ ဆောင်းပါဒလေးကိုဖတ်မိပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဆောင်ပါးလေးကို ဖတ်ပြီး ကျမ်းမာရေးဗဟုသုတ တစုံတခု ရလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ AIDS နေ့ကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာ ၁ ရက်နေ့ကတည်းက AIDS ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက်
Posted by ဖြိုးမောင်မောင်(CTM) at 10:10 PM
ဘလော့အား ၁၇-၄-၂၀၁၀ တွင်စတင်ခဲ့ ပါသည်။
A SHIN THU
တပ့် ပို့ စ် (3)
ရင်ခံနေလို့(2)
ဖြိုးမောင်မောင်(ctm). Simple theme. Powered by Blogger.